बन्द, हड्ताल र त्यसको कुप्रभाव | चितवन पोष्ट दैनिक
बन्द, हड्ताल र त्यसको कुप्रभाव
२०७१ चैत्र २७, शुक्रबार ०१:४६ गते
एमाओवादी नेतृत्वका ३० दलीय मोर्चाले चैत्र २४ गते देशव्यापी आमहड्तालको आह्वान् गरेपछि देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो । हड्तालको पूर्वसन्ध्यामा निकालिएको राँके जुलुसमा चितवनलगायत देशभर नै प्रहरीसँग झडप भएका समाचारहरु आए । देशमा दुई दशकअघिदेखि सुरू भएको बन्द, हड्तालको राजनीतिले फेरि पनि निरन्तरता पायो । विशेषतः २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको सुरूवात भएर देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली सुरू भएदेखि देशमा बन्द, हड्तालको राजनीतिले प्रश्रय पाएको हो । विशेषतः जनताको जनजीविकाको सवालमा सरकारलाई दबाब दिनका लागि हड्ताल गर्ने प्रचलनको सुरूवात भएको हो । विभिन्न विकसित देशमा पनि विभिन्न पेसा वा क्षेत्रका मानिसहरुले काम नै बहिष्कार गरेर हड्ताल गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यस्ता हड्तालहरु अन्य देशको तुलनामा धेरै नै हुने गरेको देखिन्छ ।
आमहड्तालको राजनीतिक उद्देश्य र स्वरुप पछिल्लो समयमा बदलिँदै गएको देखिन्छ । बृहत् जनताको हित तथा जनसरोकारको विषयमा हड्ताल गर्नेभन्दा पनि सीमित राजनीतिक दल र समूहको एजेन्डा तथा स्वार्थ पूरा गर्नलाई पनि हड्तालकै आयोजना गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । गाडीको ठक्करबाट कसैको निधन भए पनि राजमार्ग बन्द गर्ने तथा हड्ताल गर्नेक्रम चलेको छ । अहिले देशमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन र सहिद शब्दको दुरूपयोग भएको देखिन्छ । जे–जस्ता विरोधका कार्यक्रमलाई पनि आन्दोलन भन्ने र गाडीको ठक्करबाट कोही मारियो भने पनि सहिद घोषणाको माग गर्ने गलत संस्कार नेपाली राजनीतिमा भित्रिएको छ । एकले अर्काेको विचारलाई सम्मान नगर्ने संस्कृतिको विकास हुँदै जाँदा विचार, विवेकले भन्दा पनि नेपाली राजनीतिमा मुढे बलले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरुले पनि तोडफोड र बन्दको आयोजना नगरेसम्म पीडितको आवाजलाई नसुन्ने परम्परा बसेको छ ।
जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम चलिरहेको अवस्थामा प्रक्रिया मान्दैनौँ, सहमति गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलनमा ३० दलीय मोर्चा उत्रियो । बहुमत मान्दैनौँ र पक्रिया मान्दैनौँ भनेर सडक आन्दोलनमा जाने विश्वकै अनौठो मागमध्ये पर्दछ । जसले संविधानसभाको माग ग¥यो र संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लियो, फेरि त्यही दलले अहिले संविधानसभामा बहुमतको प्रक्रिया मान्दैनौँ भनेर सडक संघर्षमा गएको छ । पहिले नै संविधानसभाबाहिर सहमति गरेरमात्र संविधानसभाभित्र जाने भन्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुको मागले सार्वभौम संविधानसभालाई कमजोर र पंगु बनाउने अभिप्राय देखिन्छ । फेरि अहिले हिजोको पुरानो संसद्जस्तो नभई राष्ट्रको मूल कानुन बनाउन जुटेको अवस्था हो, जसको अभावमा देश संक्रमणकालीन अवस्थाले जर्जर बनेको छ । देशभरबाट बल र बुद्धि भएको युवाशक्ति पलायन हुँदै गएका छन् । तर पनि यस्ता आन्दोलन कसका लागि हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । सडकमा युवाहरुको जमात घट्दै गएको छ, अहिलेको पछिल्लो युवापुस्ता राजनीति भन्ने शब्दको उच्चारणसम्म गर्न चाहँदैन ।
स्वयं एमाओवादी टुक्रिएर विभिन्न घटकमा विभाजित हुँदा हिजो युद्ध लडेर आएका कार्यकर्तामा व्यापक निराशा छाएको छ । अझै पनि एमाओवादीका नेताहरु जोडबलका साथ आमहड्तालका पक्षमा कुर्लिएका पाइन्छन्, तर युवाको सहभागिताबिनाको आन्दोलन पक्कै पनि खल्लो हुने निश्चित छ । राजनीतिक गलत संस्कारबाट वाक्क भएका नेपाली जनताहरु पनि अहिले बन्द, हड्ताल गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने धेरै कम व्यक्तिले मात्र बन्दको समर्थन गरेको पाइन्छ । धेरैलाई बन्द, हड्तालले देश बिग्रने भयो भन्ने चिन्ता नै देखिन्छ । अहिलेको विपक्षी मोर्चाले दोस्रो संविधानसभामा जनताका माझमा गरेको वाचा तथा प्रतिबद्धता सबै बिर्सिन थालेको छ । मधेसवादी दलहरुको त झन् कुरै नगरौँ, सधैँ गरिब तथा पिछडिएका जनताको हकहितको चर्काे–चर्काे आवाज निकालेपछि सधैँ खान पुग्छ जस्तो गर्दैछन् । मधेसी जनताको जीवनस्तरमा भने कुनै ठूलो परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । मधेसी आन्दोलनको अभिप्राय धेरै मधेसवादी नेतालाई मन्त्री बनाउनुभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन । अझैसम्म बन्द, हड्ताल र आन्दोलनबाट तर्साएर आफ्नो स्वार्थ वा दलीय एजेन्डा पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ ।
बन्द, हड्ताल र तोडफोडलाई सत्तामा जाने भ¥याङ्का रुपमा विगतमा प्रयोग गरिन्थ्यो । देशमा हड्तालको संस्कृति यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि जसले बन्द, हड्तालको विरोध गरेका छन् उनीहरु आफैँ बन्द, हड्तालबाटै मन्त्री भएका नेताहरु हुन् । अहिलेका कतिपय कांग्रेस र एमालेका नेताहरु हिजो सडकमा ढुंगा हानेर नै राजनीति सुरू गरेका हुन्, अहिले उनीहरु स्वयं बन्द, हड्तालको विरोध गर्दैछन् । त्यसैगरी, हिजो अर्थमन्त्री बन्दा देशबाट बन्द, हड्ताललाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने विचार राख्ने डा. बाबुराम भट्टराई अहिले जिल्लाजिल्लामा गएर हड्ताल बाध्यता भएको विचार राख्दैछन् । यसरी सत्तामा पुग्दा बन्द, हड्तालको विरोध गर्ने र सडकमा आउँदा त्यसकै समर्थनमा लाग्नेजस्तो दुई जिब्रे राजनीतिक संस्कारले गर्दा नै देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । सधैँ सत्ता, शक्ति र पदको लोभमा मात्र घुमिरहने, राजनीतिलाई समाजसेवाभन्दा पनि परिवार पाल्ने, कमाउने पेसाजस्तो ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली राजनीति गलत बाटोतर्फ मोडिँदै गएको छ । समयमा परिवर्तन आए पनि राजनीति गर्ने संस्कार र संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन । विपक्षी नेताहरुले सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर वा असहमति राखेर विरोध गर्न सक्छन् । यदि सरकारका राजनीतिक दलले गलत गरेकै भए भोलि हुने निर्वाचनमा उनीहरुलाई जनताले पराजित गर्न सक्छन् । तर, कतिपय दललाई अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नै विश्वास नभएको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिमा धैर्यता, सहनशीलता र शिष्टताजस्ता गुणहरु नै भेट्न मुस्किल छ । हड्ताललाई सीमित अभीष्ट वा दुनो सोझ्याउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्नमात्र खोजिएको देखिन्छ । देशले धान्न नसक्ने संघीयताको धेरै प्रदेश बनाउने र जातीय राज्य निर्माणजस्तो गलत एजेन्डामा सहमतिको दबाब दिन गरिएको आन्दोलनले खासै ठूलो अर्थ राख्न सक्दैन । सरकारले पनि वार्ताकै टेबलबाटै आन्दोलनकारीहरुलाई समयमा नै कन्भिन्स गर्न सकेको देखिँदैन । सत्तादेखि सडकसम्म दलका निजी एजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिएकाले देशमा विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
बन्द, हड्तालले सबैभन्दा बढी कुन पक्षलाई मर्का पर्छ भन्ने विषयलाई नेताहरुले गम्भीर रुपमा मनन् गर्न आवश्यक छ । देशमा करोडौँको सम्पत्ति भएकालाई नेपाल वर्षदिनसम्म बन्द हुँदा पनि खासै असर गर्दैन । गाडी नगुडे पनि सजिलै उडेर एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा जान सक्छन् । सडकमा नै जीवन गुजार्ने भरिया, सामान्य व्यापारी र मजदुरलाई हड्तालको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्दछ । पेट भर्न र परिवार पाल्न मुस्किल पर्ने वर्ग नै सबैभन्दा बढी बन्द, हड्तालको मारमा पर्ने गर्दछन् । विरोध प्रदर्शन गर्ने अन्तिम माध्यमका रुपमा बन्द, हड्ताललाई लिने गरिन्छ । नेपालमा भने विकल्पका बाटाहरु हुँदाहुँदै पनि बन्द, हड्ताल रोज्ने गरिएको छ । यस्तो बलपूर्वक उच्छृङ्खल बाटोबाट अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिले जे–जस्तो निकास पाए पनि खासै राम्रो सञ्चार जनताको माझमा गराउन सक्दैन, उल्टै दण्डहीनता र अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । भर्खर–भर्खर पर्यटन र औद्योगिक विकासमा पाइला टेक्दै गरेको नेपालको गलत सन्देश बाहिर जान्छ, जसबाट विदेशी लगानी भित्रने सम्भावनाको ढोका पनि बन्द हुन्छ । यदि हड्ताल नै गर्ने हो भने ३० दलका नेताहरुले संयुक्त भोक हड्ताल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सही कार्य र निस्वार्थ उद्देश्यले हड्ताल गर्ने हो भने डा. गोविन्द केसीको भोक हड्ताललाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । उनलाई कसैले राजनीतिक दल वा समूह भनेका थिएनन्, सारा देशकै समर्थन रहेको थियो । उनको नैतिक र निस्वार्थ बलले गर्दा सरकारसमेत झुक्न बाध्य भयो । जातीय संघीयतामा सहमतिको माग राखेर विकल्पका प्रशस्त बाटो हुँदाहुँदै निर्वाचित संविधानसभा छाडेर सडकमा आएर हड्ताल गर्दैमा गोविन्द केसीको मुद्दामा जस्तो सरकार झुक्ने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक नैतिकता र इमानदारिताको खडेरीले गर्दा दर्जनौँ राजनीतिक दलको बल वा शक्तिले गरेको सडक आन्दोलनभन्दा एक जना असल, नैतिक व्यक्तिले गरेको भोक हड्तालले जनताको ठूलो विश्वास पाएको देखिन्छ । बन्द, हड्तालको आयोजना गर्ने विपक्षी दलहरुले यो कुरा सिक्न आवश्यक छ ।